SUNRISE – Studio – MMANIME
InuYasha Zawgyi ……….. ကာဂိုမီဟာ ဘုရားကျောင်းစောင့်မိသားစုကနေဆင်းသက်လာတဲ့ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ကာဂိုမီဟာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်က နတ်ဆရာမ ကီကျိုဝင်စားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်ထဲမှာမှော်ဝင်ရတနာရှိနေတာပါ။ ကာဂိုမီရဲ့အိမ်နားမှာရှေးဟောင်းရေတွင်းပျက်တစ်ခုရှိပြီး တစ်နေ့မှာတော့ရေတွင်းပျက်ဆီကနေမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်တက်လာကာ ကာဂိုမီကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကာဂိုမီသတိပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာပဒေသရာဇ်ခေတ်ကိုရောက်နေပြီး သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာမြှားနဲ့စိုက်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံပန်းသွင်ပြင်၇ှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမြှားကိုကာဂိုမီဟာ နှုတ်ပေးဖို့လုပ်ပေးမိတဲ့အခါမှာတော့….. ဒီanimeဟာ ၉၀ဖွားတော်တော်များများသိတဲ့animeဖြစ်ပြီး naruto, one pieceတို့လိုကျော်ကြားခဲ့ရုံမက ဆုတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့animeပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီanimeထဲက သီချင်းတွေဟာအတော်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တဲ့သီချင်းတွေပါ။ ငယ်ဘဝကိုပြန်အောက်မေ့ချင်သူများကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့animeလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ Unicode …………. ကာဂိုမီဟာ ဘုရားကျောင်းစောင့်မိသားစုကနေဆင်းသက်လာတဲ့ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ကာဂိုမီဟာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်က နတ်ဆရာမ ကီကျိုဝင်စားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ ့ကိုယ်ထဲမှာမှော်ဝင်ရတနာရှိနေတာပါ။ ကာဂိုမီရဲ့အိမ်နားမှာရှေးဟောင်းရေတွင်းပျက်တစ်ခုရှိပြီး တစ်နေ ့မှာတော့ရေတွင်းပျက်ဆီကနေမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်တက်လာကာ ကာဂိုမီကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကာဂိုမီသတိပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာပဒေသရာဇ်ခေတ်ကိုရောက်နေပြီး သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာမြှားနဲ ့စိုက်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံပန်းသွင်ပြင်ရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမြှားကိုကာဂိုမီဟာ နှုတ်ပေးဖို ့လုပ်ပေးမိတဲ့အခါမှာတော့….. ဒီanimeဟာ ၉ဝဖွားတော်တော်များများသိတဲ့animeဖြစ်ပြီး naruto, one pieceတို ့လိုကျော်ကြားခဲ့ရုံမက ဆုတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့animeပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီanimeထဲက သီချင်းတွေဟာအတော်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တဲ့သီချင်းတွေပါ။ ငယ်ဘဝကိုပြန်အောက်မေ့ချင်သူများကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့animeလို ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ EPISODE 1 EPISODE2EPISODE3EPISODE4EPISODE5EPISODE6EPISODE ...
Yashahime: Princess Half-Demon ခွေးမင်းသားမျိုးဆက္များ ........................................ ဒါကတော့ ခွေးမင်းသားတွေနာရာကူမိစ္ဆာကောင်ကြီးကို ဝိုင်းဗျင်းပြီးနောက္မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဗျ ဒီအပိုင်းမှာ နာရာကူမရှိတဲ့နောက် ခွေးမင်းသားတို့အခြေအနေ သူတို့မျိုးဆက်လို့ထင်ရတဲ့ချာတိတ်‌တွေ ခေတ်ဟောင်းရောက်လာတာတွေကိုအဓိကပြသွားတာပါ ထွက်လက်စမလို့တပတ်တပိုင်းပဲလာပါမယ် Original Name – 半妖の夜叉姫 Status – Returning Series Network – NTV, YTV Aired – 2020-10-03 Genres__Animation, Action & Adventure File size__( 175MB-300MB) Quality__1080p Format__mp4 Duration__25mins per EP Subtitle__Burmese Translated by DrNyan Encoded by Shine Bo Bo Latt Episode (1) [175 MB] Mediafire / DatBu / Usersdrive / Yandex / Gdrive / Meganz Episode (2) [197 MB] Mediafire / DatBu / Usersdrive / Racaty / Gdrive / Meganz Episode (3) [251 MB] Mediafire / Episode (4) [297 MB] Mediafire / Episode (5) [278 MB] Meganz / Episode (6) [287 MB] Meganz / Episode (7) [375 MB] Meganz / Episode (8) [375 MB] Meganz / Episode (9) [350 ...
Mobile Suit Gundam Mobile suit Gundam 0079 Synopsis အချိန်ကား Universal Century 0079 ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ အာကာသထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီး "sides" လို့ခေါ်တဲ့ ကိုလိုနီအစုအဝေးတွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှ side3ဟာ "Principality of Zeon" အဖြစ်ကြေညာပြီး ကမ္ဘာမြေနဲ့ ကိုလိုနီတွေကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Earth Federation အစိုးရကို ကို စစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ "mobile suit" လို့ခေါ်တဲ့ လူပုံသဏ္ဍန်စွမ်းအားကြီးလက်နက်တွေကြောင့် Zeon ဟာ အလျင်အမြန်ပဲအသာစီးရလာပါတယ်။ စစ်ပွဲစခဲ့ပြီး ကိုးလအကြာမှာတော့ Earth Federation ဟာ Gundam လို့ခေါ်တဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် mobile suit ကိုပါ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Zeon ဟာ Gundam ထားရှိရာနေရာဖြစ်တဲ့ ကိုလိုနီတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြန်ပြီးခုခံကြမလဲဆိုတာ...။ Translated and encoded by Oke ...